PRABHAS ရုပ်ရှင်ကားများ (၁၆) - ဘောလီးဝုဒ်သရုပ်ဆောင်တွေ
Prabhas ရုပ်ရှင်ကားများ (၁၆)
တောင်ကိုရီးယားသရုပ်ဆောင်ပရာဘေ့စ်သည်သူ၏ရုပ်ရှင်ကားများ၏အောင်မြင်ကျော်ကြားမှုကြောင့် Tollywood ၏အကြီးမားဆုံးစူပါစတားဖြစ်လာသည်။ '' Baahubali: အစ (2015) နှင့် 'Baahubali 2: နိဂုံးချုပ်' (2017), ကျော်စုစုပေါင်းရန်ပထမ ဦး ဆုံးအိန္ဒိယရုပ်ရှင်ဖြစ်လာခဲ့သည်သော၁၀၀၀ ကုresေဘာသာစကားအားလုံးမှာ၊ ဆယ်ရက်အတွင်းမှာပဲ။ Prabhas သည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးရှိပရိသတ်တစ် ဦး ၏ကြီးမားသောပရိသတ်ကိုရရှိခဲ့သည်။ မင်းသား၏လူကြိုက်များမှုသည်ထိုကဲ့သို့သောအမြင့်သို့ရောက်ခဲ့ပြီးပြီဖြစ်သည့် Madame Tussaud သည်သူမ၏ဖယောင်းရုပ်တုကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင်သူသည်တောင်အာဖရိကကြယ်ပွင့်များထဲမှဖယောင်းတိုင်များထဲမှပထမဆုံးဖြစ်သည်။ ဒီတော့ဒီမှာ Prabhas ၏ Dubbed Movies of Hindi စာရင်း။
1. '' Varsham '' Baarish- အဆိုပါအချစ်၏ရာသီ 'အဖြစ်ဟိန္ဒူအတွက်အမည်ရှိ
Varsham (၂၀၀၄) သည် Sobhan ရိုက်ကူးသော Tollywood အချစ်ဇာတ်လမ်းရုပ်ရှင်ဖြစ်သည်။ Prabhas , Trisha Krishnan နှင့် Gopichand အဓိကအခန်းကဏ္ played မှပါဝင်ခဲ့သည်။ ဒီရုပ်ရှင်ဟာဇာတ်လမ်းတွဲဖြစ်ပြီးဟိန္ဒူဘာသာလို့အမည်ပေးထားသည် '' Baarish- အချစ်၏ရာသီ ' ။
ကြံစည်မှု - ရုပ်ရှင်ထဲတွင်အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတစ် ဦး သည်မိုးရွာတိုင်းနှင့်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး တိုက် မိ၍ တိုက် မိ၍ တိုက် မိ၍ တိုက်မိကြသည်။ အမျိုးသမီး၏ဖခင်ကသူမနှစ်သက်သောယောက်ျားနှင့်လက်ထပ်ရန်အတွက်နားလည်မှုလွဲခြင်းများဖြစ်ပေါ်စေသည်။
2. 'Raghavendra' ကို Sanyasi- The Warrior Saint 'အဖြစ်ဟိန္ဒူဘာသာဖြင့်ခေါ်ဝေါ်
Raghavendra (၂၀၀၃) သည် Tolures ၏လှုပ်ရှားမှု၊ Suresh Krishna မှဒါရိုက်တာနှင့်ရင်ခုန်စရာရုပ်ရှင်ဖြစ်သည်။ Prabhas, Anshu နှင့် Shweta Agarwal တို့ပါဝင်သည်။ ဒီရုပ်ရှင်ဟာ box-office မှာပျမ်းမျှဖြစ်ပြီး၊ အခါ Sanyasi: အဆိုပါ Warrior စိန့်။
ကြံစည်မှု - ရုပ်ရှင်ထဲတွင်မတရားမှုကိုမခံရပ်နိုင်သည့်ရဲရင့်သောလူငယ်တစ် ဦး သည်ဒေသခံတ ဦး နှင့်တ ဦး ရန်ဖြစ်ပြီးရလဒ်အနေဖြင့်လူသည်ချစ်သူကိုသတ်ပြီးမိသားစုအားမြို့မှထွက်ခွာရန်တောင်းဆိုခြင်းကိုခြိမ်းခြောက်ခဲ့သည်။ သူ့မိဘများကသူ့ကိုသန့်ရှင်းသော Mantralayam သို့ခေါ်ဆောင်သွားသည်။
၃ ။ 'Pournami' အဖြစ်ဟိန္ဒူအတွက်အမည်ပေးထားသည် 'Tridev- ပြည့် Ki Jung'
ကွမ်းခြံကုန်း (၂၀၀၆) သည်တီဂလူးဒရာနှင့်ဒဏ္dramာရီဆန်ဆန်ဇာတ်ကားဖြစ်သည် Prabhu Deva ။ ဒါဟာ Trisha Krishnan, Prabhas, Charmy သရုပ်ဆောင်ခဲ့သည် Rahul Dev နှင့် Sindhu Tolani ။ သို့သော်ကြီးမားသောသရုပ်ဆောင်နေသော်လည်းရုပ်ရှင် box Office ရဲမှာကောင်းစွာလုပ်ဆောင်နိုင်ဘူး။ အဆိုပါရုပ်ရှင်အဖြစ်ဟိန္ဒူသို့အမည်တပ်ထားသောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် 'Tridev - ပြည့်ပြည့်စုံလင်' ။
ကြံစည်မှု - အခမ်းအနားအကအတွက်လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခဲ့သောအမျိုးသမီးငယ်တစ် ဦး သည်မမျှော်လင့်ဘဲပျောက်ကွယ်သွားသည်။ လျှို့ဝှက်အတိတ်နှင့်အတူသူစိမ်းတစ် ဦး သည်မြို့တော်သို့ရောက်ရှိလာပြီးအမျိုးသမီးငယ်၏ညီမအားကခုန်သင်ကြားရန်ကမ်းလှမ်းသည်။
လေး။ 'Adavi Ramudu' အဖြစ်ဟိန္ဒူအတွက်အမည်ပေးထားသည် 'The Strong Man Badal'
Adavi Ramudu (2004) သည် B Gopal မှရိုက်ကူးထားသောစိတ်ကူးယဉ်ဇာတ်ကားဖြစ်သည်။ Prabhas နှင့် Aarti Agarwal တို့သည်အဓိကအခန်းကဏ္ played မှပါဝင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါရုပ်ရှင် box-office မှာဘေးအန္တရာယ်ကြီးနှင့်အဖြစ်ဟိန္ဒူသို့ခေါ်ဝေါ်ခဲ့သည် 'The Strong Man Badal' ။
ကြံစည်မှု - ရွာငယ်တစ်ရွာမှဆင်းရဲသောသူတစ် ဦး သည်မြို့ပြကောလိပ်တက်ပြီးချမ်းသာသောမိသားစုမှအမျိုးသမီးတစ် ဦး ၏စိတ်နှလုံးကိုရရှိသည်။ သူမ၏ဆွေမျိုးများကသဘောမတူပါ။ နောက်ဆုံးတွင်ထိုစုံတွဲသည်တောထဲသို့ထွက်ပြေးသွားပြီးသူမကိုဒေါသထွက်နေသည့်မိသားစုကလိုက်ရှာသည်။
၅ ။ အချိန် Munna အဖြစ်ဟိန္ဒူအတွက်အမည်ပေးထားသည် 'Bagawat- Ek Jung'
Munna (2007) သည် Vamsi Paidipally မှရိုက်ကူးသော Tollywood လှုပ်ရှားမှုရုပ်ရှင်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါရုပ်ရှင် Prabhas သရုပ်ဆောင်နှင့် Ileana D'Cruz အတူ ဦး ဆောင်အခန်းကဏ္၌တည်၏ Prakash Raj , Kota Srinivasa Rao နှင့် Rahul Dev တို့သည်အခြားအရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ in များတွင်ပါ ၀ င်သည်။ ၎င်းသည်ဟိန္ဒူဘာသာအဖြစ်နိမ့်သောပျမ်းမျှရုပ်ရှင်ကားဖြစ်သည် '' Bagawat- Ek Jung '' ။
ကြံစည်မှု - Munna သည် Khakha အားသူ၏ဖခင်ကိုမသိသောဒေသခံဂိုဏ်းသားကိုပစ်မှတ်ထားကာသူ့မိခင်အားငွေဖြင့်ရောင်းစားခြင်းအတွက်လက်စားချေခြင်းဖြစ်သည်။
၆။ 'Yogi' ကိုဟိန္ဒူဘာသာအား 'Maa Kasam Badla Lunga' ဟုခေါ်တွင်ခဲ့သည်။
Yogi (2007) V.V. အားဖြင့်ဒါရိုက်တာ Telugu အရေးယူဒရာမာရုပ်ရှင်ဖြစ်ပါတယ် Prabhas ရှိပြီး Vinayak နာယက ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်တက်တွဲ။ ထိုရုပ်ရှင်သည် Flop တစ်ခုဖြစ်ပြီးဟိန္ဒူဘာသာအဖြစ်အမည်တပ်ထားသည် '' Maa Kasam Badla Lunga '' ။
ကြံစည်မှု - ရွာတစ်ရွာမှမိခင်တစ် ဦး သည် Hyderabad ရှိသူမ၏သားကိုရှာဖွေသည်။ သူသည်သူ၏အမည်ကိုပြောင်းလဲခဲ့ပြီးယခုမြို့၏လူဆိုးဂိုဏ်းသားများအားပစ်မှတ်တစ်ခုနှင့်ခြိမ်းခြောက်မှုတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းသတိမထားမိပါ။
7. '' Dejjar-Man of Power '' ဟုဟိန္ဒူဘာသာဖြင့် 'Bujjigadu' ကိုခေါ်ခဲ့သည်။
Bujjigadu (2008) Puri Jagannadh မှတီလော့တီရင်ခုန်လှုပ်ရှားမှုရုပ်ရှင်ကားတစ်ကားဖြစ်သည်။ Trisha Krishnan နှင့် Sanjana နှင့်အတူ Prabhas သည်အဓိကအခန်းကဏ္ plays မှပါ ၀ င်သည်။ အဆိုပါရုပ်ရှင် box-office မှာကောင်းစွာအလုပ်မလုပ်ခြင်းနှင့်အဖြစ်ဟိန္ဒူအတွက်ဟုအမည်ပေးထားသည် '' ပါဝါ၏ Deewar- က Man '။
ကြံစည်မှု - သူ၏ချစ်သူ Chitti နှင့်အငြင်းပွားမှုကြောင့် Bujji သည်ငယ်စဉ်ကလေးဘဝကတည်းကအိမ်မှထွက်ပြေးခဲ့သည်။ သူသည်ချန်နိုင်းတွင် ၁၂ နှစ်ကြာနေထိုင်ခဲ့ပြီးကျန်ဇာတ်လမ်းမှာသူတို့၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုအောင်မြင်စေရန်ယခုသူတို့နှင့်တွေ့ဆုံခြင်းအကြောင်းဖြစ်သည်။
(၈) 'Ek Niranjan' ကိုဟိဒီဘာသာဖြင့် 'Ek Hi Raasta'
Ek niranjan (၂၀၀၉) သည်ပလူဘရာနှင့်သရုပ်ဆောင်ထားသောတီလီတီအရေးယူမှု၊ ရင်ခုန်စရာနှင့်ရာဇ ၀ တ်မှုရုပ်ရှင်ကားဖြစ်သည်။ Kangana ranaut ဦး ဆောင်မှုအခန်းကဏ္၌တည်၏။ ထိုရုပ်ရှင်သည် Flop တစ်ခုဖြစ်ပြီးဟိန္ဒူဘာသာအဖြစ်အမည်တပ်ထားသည် 'Ek ဟိုင်း Raasta' ။
ကြံစည်မှု - မုဆိုးတစ် ဦး သည်သူငယ်ငယ်တုန်းကခွဲခွာခဲ့ရသောမိသားစုကိုရှာဖွေပြီးဂိုဏ်းဝင်တစ် ဦး ၏ညီမနှင့်ချစ်မိသွားသည်။
၉ ။ Perfect 'နံပါတ် ၁ Mr. Perfect' အဖြစ်ဟိန္ဒူဘာသာဖြင့်ခေါ်ဝေါ်
Mr. Perfect (၂၀၁၁) သည် Prabhas သရုပ်ဆောင်ထားသည့် Dasaradh Kondapalli ၏ Tollywood ရင်ခုန်စရာဟာသရုပ်ရှင်ဖြစ်သည်။ Kajal Agarwal နှင့် Taapsee Pannu အဓိကအခန်းကဏ္တွင်သရုပ်ဆောင်များ Murali Mohan၊ Prakash Raj၊ Sayaji Shinde၊ Nassar နှင့် Viswanath Kasinadhuni တို့သည်အဓိကကျသောအခန်းကဏ္ play မှပါ ၀ င်သည်။ ထိုရုပ်ရှင်သည်အကောင်းမြင်သုံးသပ်ချက်များကိုရရှိခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးတွင် box-office blockbuster ဖြစ်လာသည်။ ၎င်းကိုခေါင်းစဉ်အောက်တွင်ဟိန္ဒူဘာသာဟုအမည်ပေးထားသည် '' No.1 မစ္စတာပြီးပြည့်စုံသော '' ။
ကြံစည်မှု - သူ၏တန်ဖိုးများကိုအလျှော့ပေးလိုက်လျောရန်ငြင်းဆန်သောခေတ်သစ်စိတ်ပညာဆော့ဖ်ဝဲလ်ကျွမ်းကျင်သူသည်ရှေးရိုးစွဲနှင့်ရိုးရာနှစ်မျိုးစလုံးရှိသောသူမနှင့်သူမနည်းလမ်းများနှင့်အကျွမ်းတဝင်ဖြစ်လာသည်
၁၀။ 'Darling' ကို 'Sabse Badhkar Hum' ဟုအမည်ပေးထားသည်
အချစ် (၂၀၁၀) သည်အိန္ဒိယကာဂူဘာသာစကားမိသားစုမိသားစုပြဇာတ်ဖြစ်သည်။ အေကာနွန်ကာရန်ဒါရိုက်တာဖြစ်သည်။ ရုပ်ရှင်သည် Prabhas နှင့် Kajal Aggarwal တို့ကိုအဓိကနေရာမှသရုပ်ဆောင်နေစဉ်တမီးမင်းသား Prabhu Ganesan သည်အဓိကအခန်းကဏ္ plays မှပါ ၀ င်သည်။ အဆိုပါရုပ်ရှင်ဝေဖန်သူများနှင့်ပရိသတ်ကိုနှစ် ဦး စလုံးထံမှအပြုသဘောပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ ဒါဟာခေါင်းစဉ်အောက်မှာဟိန္ဒူအတွက်ဟုအမည်ပေးထားသည့်အလွန်စူပါ hit ရုပ်ရှင်ဖြစ်ခဲ့သည် 'Sabse Badhkar Hum' ။
ကြံစည်မှု - လူဆိုးဂိုဏ်း၏သမီးမှမလိုလားအပ်သောလက်ထပ်ထိမ်းမြားမှမိမိကိုမိမိကယ်တင်ရန်, လူတဆွစ်ဇာလန်၌သူ၏ကလေးဘဝရည်းစားနှင့်အတူပြန်လည်ဆုံဆည်း၏ဇာတ်လမ်းပြောပြသည်။
11. 'Baahubali' ကိုဟိန္ဒူဘာသာတွင် 'Baahubali' အဖြစ် အစ ''
Baahubali (2015) ကဒါရိုက်တာတစ် ဦး အိန္ဒိယမော်ကွန်းသမိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်ရုပ်ရှင်ဖြစ်ပါတယ် အက်စ်အက်စ် Rajamouli ။ အဆိုပါရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် Prabhas, Rana Daggubati , မသီတာရှာတီ နှင့် တာမန်နာ ပံ့ပိုးကူညီရေးအခန်းကဏ္ in များတွင် Ramya Krishnan, Sathyaraj နှင့် Nassar တို့နှင့်အတူ ဦး ဆောင်အခန်းကဏ္။ ၎င်းရုပ်ရှင်ကိုဘတ်ဂျက် ၁.၈ ဘီလီယံဖြင့်ထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီး၎င်းသည်၎င်း၏အချိန်ကာလတွင်ဈေးအကြီးဆုံးအိန္ဒိယရုပ်ရှင်ဖြစ်လာသည်။ ဒီရုပ်ရှင်ဟာအောင်မြင်ကျော်ကြားပြီးအောင်မြင်ကျော်ကြားခဲ့တဲ့ Box Office အောင်မြင်မှုရရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာဟိန္ဒူဟုခေါ်ဝေါ်ဗားရှင်းပါပဲ '' Baahubali: အစ ထို့အပြင်အိန္ဒိယတွင်အမြင့်ဆုံးဝင်ငွေအမြင့်ဆုံးဝင်ငွေရရှိသောရုပ်ရှင်ဖြစ်လာခြင်းအားဖြင့်မှတ်တမ်းများစွာကိုချိုးဖောက်ခဲ့သည်။
ကြံစည်မှု - ဒီရုပ်ရှင်ဟာပျောက်ကွယ်သွားတဲ့တရားဝင်အမွေအနှစ်ဖြစ်တဲ့ Mahishmati ရဲ့အမွေဆက်ခံသူရဲ့ပုံပြင်ဖြစ်ပြီးသူဟာသူပုန်စစ်သည်နှင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုခံစားနေစဉ်သူဟာစစ်မှန်တဲ့ဝိသေသလက္ခဏာကိုလေ့လာပြီးသူမဟာ Mahismati ဘုရင်ဟောင်းကိုကယ်တင်ဖို့ရည်ရွယ်ထားသူဖြစ်တယ်။
၁၂ ။ '' Chhatrapati ' အဖြစ်ဟိန္ဒူအတွက်အမည်ပေးထားသည် Hukumat Ki Jung
Chhatrapati အက်စ်အက်စ် Rajamouli နေဖြင့်ရေးသားနှင့်ညွှန်ကြားထား (2005) Telugu အရေးယူ - ဒရာမာရုပ်ရှင်။ Prabhas ကအဓိကအခန်းကဏ္ plays မှပါ ၀ င်သည် Shriya Saran , Bhanupriya နှင့် Pradeep Rawat တို့သည်အခြားအခန်းကဏ္ in မှပါ ၀ င်သည်။ ဒီရုပ်ရှင်ဟာ Box-office မှာ blockbuster ဖြစ်ပြီးဟိန္ဒူဘာသာလို့အခေါ်ခံရသည် 'Hukumat Ki Jung' ။
ကြံစည်မှု - Vizag ဆိပ်ကမ်းရှိအိုးအိမ်စွန့်ခွာထွက်ပြေးသောသီရိလင်္ကာလူမျိုးများကိုဒေသတွင်းလှိုင်းလုံးများကထိန်းချုပ်သည် ဤသည်မှာ Chatrapati Sivaji ၏ဇာတ်ကြောင်းဖြစ်သည်၊ သူသည်ဤဖိနှိပ်မှုကိုကျော်လွှား။ သူကွယ်လွန်သွားသောမိခင်နှင့်အစ်ကိုနှင့်မည်သို့ပြန်လည်ပေါင်းသင်းခဲ့သနည်း။
13. 'Chakram' အဖြစ်ဟိန္ဒူဘာသာဖြင့်ခေါ်ဝေါ်သော 'Chakram'
Chakram (၂၀၀၅) သည်တီလူးဂျက်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားဖြစ်သည်Krishna ဟိန္ဒူ Vamshi ။Charmy Kaur နှင့်အတူ Prabhas သည်အဓိကအခန်းကဏ္ played မှပါ ၀ င်ခဲ့သည် ငန် အမျိုးသမီးဆောင်ကစားခဲ့သည်။ ၎င်းသည် box-office တွင်ပြောင်ပြောင်တင်းတင်းရှုပ်ထွေးခဲ့ပြီးဟိန္ဒူဘာသာကိုခေါင်းစဉ်တစ်ခုတည်းဖြင့်လည်းအမည်တပ်ခဲ့သည် '' Chakram '' ။
ကြံစည်မှု - လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သောလျှို့ဝှက်ချက်ရှိသောဆေးကျောင်းသူတစ် ဦး သည်သူ၏သတို့သမီးနှင့်နေရင်းမြို့ကိုစွန့်ခွာသွားသော်လည်းသူ၏အတိတ်ကသူနှင့်ဆုံတွေ့ခဲ့သည်။
tehseen poonawalla ဝီကီသောသူသည်
14. 'Khatarnak Khiladi' အဖြစ်ဟိန္ဒူဘာသာဖြင့်ခေါ်ဝေါ်သော 'Mirchi'
Mirchi (၂၀၁၃) သည် debutante Koratala Siva မှရေးသား၊ ဒါရိုက်တာ Telugu တီထွင်ထားသည့်ရုပ်ရှင်ဖြစ်သည်။ ရုပ်ရှင်က Prabhas, Anushka Shetty နဲ့ Richa gangopadhyay အဓိကအခန်းကဏ္ in နှင့် Sathyaraj, Adithya Menon နှင့် Nadhiya တို့တွင် အဆိုပါရုပ်ရှင်သည်အကြီးမားဆုံးသောအရာဖြစ်ခဲ့ပြီးဟိန္ဒူအဖြစ်အမည်တပ်ခဲ့သည် 'Khatarnak Khiladi' ။
ကြံစည်မှု - လူတယောက်သည်သူ၏ရည်းစား၏အကြမ်းဖက်မိသားစုကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲရန်, အပြင်ပန်း, နိုင်ရန်အတွက်မိမိတိုင်းပြည်သို့ပြန်သွား, ဒါပေမယ့်သူကထူးဆန်းတဲ့ဆက်သွယ်မှုများနှင့်တစ် ဦး မဟုတ်ဘဲမှောင်မိုက်အတိတ်ရှိပုံရသည်။
15. 'သူပုန်2၏ပြန်လာ' 'အဖြစ် Hindii အတွက်အမည်ရှိ' 'Billa'
ဘီလာ (၂၀၀၉) သည်အိန္ဒိယဘာသာစကားတီထွင်သည့်လှုပ်ရှားမှုဖြစ်သည့် Meher Ramesh မှရိုက်ကူးသော Thriller ဇာတ်ကားဖြစ်သည်။ Prabhas က Anushka Shetty နဲ့ Namitha သူရဲကောင်းကစားနေသည်။ ဒီရုပ်ရှင်ကို box-office မှာရိုက်ခဲ့ပြီးဒီခေါင်းစဉ်အောက်မှာဟိန္ဒူဘာသာလို့သတ်မှတ်ခဲ့တယ် '' သူပုန်2၏ပြန်လာ '။
ကြံစည်မှု - တစ် ဦး ကရဲစစ်ဆေးရေးဂိုဏ်းရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်များကိုဖုံးကွယ်ရန်လူဆိုးဂိုဏ်း - ပုံတူပေးပို့သည်။
16. '' Baahubali 2: အဆိုပါနိဂုံးချုပ် 'အဖြစ်ဟိန္ဒူဘာသာ၌ Ba'dubali 2'dubbed
Baahubali2(2017) အက်စ်အက်စ် Rajamouli နေဖြင့်ညွှန်ကြားထားတဲ့အိန္ဒိယသမိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်ရုပ်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းကိုဟိန္ဒူဘာသာအဖြစ်ခေါ်ဆိုခဲ့သည် '' Baahubali 2: အဆိုပါနိဂုံးချုပ် '။ ရုပ်ရှင်သည် Tollywood စက်မှုလုပ်ငန်းမှအဓိကသရုပ်ဆောင်များကို Prabhas, Anushka Shetty, Rana Daggubati နှင့် Sathyaraj တို့နှင့်အတူသရုပ်ဆောင်ထားသည်။ ၎င်းသည်အိန္ဒိယ၏ပထမဆုံးအကြိမ်ရိုက်ကူးသည့်ရုပ်ရှင်ဖြစ်လာသည်၁၀၀၀ ကုresေဘာသာစကားအားလုံးမှာ၊ ဆယ်ရက်အတွင်းမှာပဲ။
ကြံစည်မှု - Bahubali ၏သား Shiva သည်သူ၏အမွေအနှစ်ကိုသိသောအခါသူသည်အဖြေများကိုစတင်ရှာဖွေသည်။ သူ၏အဖြစ်အပျက်သည်အတိတ်ဖြစ်ရပ်များနှင့်ဆက်စပ်နေပြီး Mahishmati Kingdom တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
kumkum bhagya မင်းသမီး sriti jha
အသစ်သောမိန်းကလေးမိတ်ဆွေတစ် tharoor shashi
အဆိုပါ kapil Sharma ကပြပွဲ၏ထုတ်လုပ်သူ
sushant Singh က rajput ခန္ဓာကိုယ်တိုင်းတာခြင်း